भीमदत्तमा एमालेको प्रतिस्पर्धी नै छैन : विष्ट
४७१७ पटक हेरिएको
प्रकाशित: २०७४ जेष्ठ २२ , १२:५५ बजे
– सुरेन्द्र विष्ट
नगर प्रमुख पदका उम्मेदवार
भीमदत्त नगरपालिका, नेकपा एमाले
स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन नजिकिएसँगै कञ्चनपुरका राजनीतिक दल चुनावी प्रचारप्रसारमा व्यस्त छन् । कञ्चनपुर सदरमुकाम भीमदत्त नगरपालिकामा पनि चुनावी सरगर्मी बढेको छ । नेकपा एमालेले जिल्ला सचिव सुरेन्द्र विष्टलाई भीमदत्त नगगरपालिकाको नगर प्रमुख (मेयर) को उम्मदेवार बनाएको छ । विष्टका एजेण्डा के छन् ? विजयी भएमा भीमदत्त नगरलाई कसरी सुन्दर र समृद्ध बनाउने छन् ? मेयरका उम्मेदवार विष्टसँग यी र यस्तै प्रश्नको जवाफ लिने जमर्काे गरेका छन् पत्रकार जनकसिंह विष्टले :
भीमदत्त नगरपालिकामा चुनावको तयारी कस्तो छ ?
– चुनावको तयारी तीव्र गतिमा भइरहेका छ । हामी निरन्तर रुपमा जनताको घरदैलोमा गएका छौं । एमालेको प्रदेश नम्बर ७ को बैठकले बैशाख १२ गते नैै उम्मेदवारको टुंगो लगाएको हो । उम्मेदवारको टुंगो लगाइसकेपछि एमाले भीमदत्त नगरपालिका नगर संगठनको आयोजनामा भेला सम्पन्न भयो । भेलाले कार्ययोजना निर्माण गर्‍यो । भेलाको निर्णय अनुरुप मतदातासँग अन्तक्र्रिया र छलफल भइरहेको छ । विभिन्न सरोकारवाला व्यक्तिसँग परामर्श र छलफल भइरहेको छ । पार्टीका एजेण्डा र भीमदत्त नगरपालिकामा विजयी भइसकेपछि गर्ने कामबारे जनताको बीचमा राखिरहेका छौं ।
घरदैलो अभियानमा हुनुहुन्छ । मतदाताको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभएको छ ?
– लामो समयदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन नभएकाले जनताको प्राथमिकता विकास रहेको छ । जनताको घरदैलोमा आउने, जनताको समस्याको सुनवाई गर्ने, जनताले अगाडि सारेका विकासका योजना पूरा गर्ने जनप्रतिनिधि जनताले चाहेका छन् । र, मतदाताले सोही अनुसार प्रतिवद्धताको माग गरेका छन् ।
हामीले नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका समस्या टिपोट गरेर समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छौं । यतिबेला नगरवासी उत्साहित देखिन्छन् । किनकि, एमालेले राष्ट्रियताका लागि, नेपालको समृद्धिका लागि काम गरिरहेको छ । एमाले सरकारको अगुवाईमा भएको काम, राष्ट्रियताका लागि लिएको अडानप्रति मतदाता आकर्षित छन् ।
तपाईले बुझेका र जनताले अपेक्षा गरेका विषयमा के भिन्नता ?
– हामी पहिलेदेखि नै जनताको बीचमा कुनै न कुनै रुपमा सम्पर्कमा थियौं । भुगोलको हिसाबले, पार्टी निर्माण, जनताका जनजीविकासँग जोडिएका विषयवस्तुलाई अध्ययन विश्लेषण गर्ने सवाल होस् वा विभिन्न सामाजिक कार्यका सहभागी हुने सन्दर्भमा । हामी जनतालाई दुःख पर्दा साथ दिने, जनताका समस्या समाधान गर्ने तथा बाढीपीडितका समस्या समाधान गर्न हामी तत्पर रह्यौं । अहिलेसम्म पनि गरिरहेका छौं ।
भीमदत्त नगरपालिका बाढीको जोखिममा रहेको छ । बाढीपीडितको समस्या समाधान गर्न हामी हरपल लागिरहेका नै छौं । बाढीपीडितका समस्या र कठिनाइ के हुन् भन्ने हामीलाई जानकारी त थियो । तर, केही काम भइरहेको सन्दर्भमा ‘ती राम्रा काम मैले गरे’ भन्ने कुरा केही राजनीतिक दलका व्यक्तिले अघि सारे । गाउँतिर जाँदा भने वास्तविकता फरक पाइयो । गाउँमा धेरै समस्या छन् । विद्युत्का तार छन्, उज्यालो छैन । बिल मात्र तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । पंखा छ हावा छैन । स्कूल छन् तर स्कूलमा बस्नका लागि राम्रो भौतिक पूर्वाधार छैनन् । विद्यालयमा दरबन्दी अनुसारका शिक्षक छैनन् । जनतासँग जमिन छ तर, लालपूर्जा छैन । जनतासँग गर्न सक्ने क्षमता, सीप भएपनि काम छैन । गाउँघरमा नहर छन् तर पानी छैन । शुद्ध खानेपानी, ढल निकासको व्यवस्था छैन । कृषि कार्य गर्दा आवश्यक पर्ने मल, बीउ प्राप्त हुँदैन । त्यस्तै, जनताका सरोकारसँग जोडिएका सडक ग्राभेल, कल्र्भट, पुल, जग्गाधनीको लालपूर्जा लगायतका सरोकारका विषय छन् ।
एमालेको नेतृत्वमा बनेको २०५१ सालको सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिने कार्यक्रम लिएको थियो । त्यो कार्यक्रम अनुसार सुविधा पाउनुपर्ने नागरिकले कर्मचारीको एउटा सानो कमजोरीले भत्ता पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । उमेरले ७६ वर्ष पुगेका पनि नागरिकतामा सामान्य गल्तीले सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित रहेका छन् । सरकारी कार्यालयबाट जनतालाई प्रदान गरिने सेवासुविधा जुन रुपमा जनताबीचमा जानुपर्ने हो त्यो भएको छैन । विद्युत् कार्यालयले एउटा पोल थपिदिने हो भने पनि ठूलो विकास हुन्छ ।
मतदाताका समस्या समाधान गर्न तपाईसँग एजेण्डा के छन् ?
– भीमदत्त नगरपालिकामा धेरै विकासका अवसर छन् । ती अवसरलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सकियो भने विकासलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । हामीले राष्ट्रिय स्वाभिमान, कल्याणकारी राज्य, सामाजिक सुरक्षा र समृद्धिसँगै गाउँसहरको विकास, जनताको सरोकार, सडक, खानेपानी, शिक्षा, सञ्चार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कृषि, वन तथा पर्यटनसहितको आधुनिक भीमदत्तनगर भनेका छौ ।
भीमदत्त सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । भीमदत्त नगरपालिका भारतसँग सीमा जोडिएको छ । सीमा व्यवस्थापन सुरक्षित ढंगबाट गर्न सकियो भने सुदूरपश्चिमको मुख्य नाकाको रुपमा जोड्न सक्छौ । जलस्रोतको हिसाबले पनि सुदूरपशिचमको पञ्चेश्वरमा परियोजना बनाइरहेका छौं । पञ्चेश्वर परियोजनाबाट मात्रै हामी राष्ट्रलाई ठूलो योगदान दिन सक्छौ । राष्ट्रको ढुकुटीमा योगदान दिएवाफत कञ्चनपुरको साथै भीमदत्त नगरपालिकाको विकासका लागि रकम आउन सक्ने सम्भावना छ । पर्यटनको हिसावले पनि हेरिएको शुक्लाफाँटा निकुञ्जमा दुलर्भ बाह्रसिंगे छन् । त्यसकोे प्रचारप्रसार गर्ने सम्भावना हामीसँग छ । धार्मिक पर्यटनको सम्भावना बोकेका धेरै धार्मिकस्थल पनि रहेका छन् । जसमध्ये पूर्णागिरी दर्शन गर्ने धार्मिक पर्यटकलाई यहाँ ल्याउन सकियो भने मात्र त्यसले हाम्रो आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउन सकिन्छ । उर्वर जमिन छ । उर्वर जमिनमा त्यो भू–उपयोग नीतिले वैज्ञानिक ढंगले कृषिलाई आधुनिकीकरण गरेर उत्पादन वृद्धि गर्ने हो भने यस क्षेत्रलाई अन्नको भण्डार बनाउन सकिन्छ ।
भीमदत्तलाई शैक्षिक हवको रुपमा विकास गर्न चाहन्छौं । महेन्द्रनगरमा सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय बनिसकेको छ । अब प्राविधिक विद्यालय पनि सञ्चालन गर्ने हो भने भीमदत्त शैक्षिक बन्न सक्छ । शैक्षिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाएमा भीमदत्त नगरपालिका आकषर्णको केन्द्र बनाउन सकिन्छ । भीमदत्त नगरपालिकासँग भएको वनको सही सदुपयोग गर्न जडिबुटीको उपयोग गर्न सक्यौं भने विकासका लागि ठूलो रकम प्रप्त गर्न सकिन्छ । दक्ष, सीप भएका क्षमतावान व्यक्ति भीमदत्त नगरपालिकामा छन् ।
हाम्रो प्रतिवद्धता मैले गर्ने होइन, हामीले गर्ने हो भन्ने सोचका साथ नगरपालिका सबैको हो । नगरपालिका समृद्ध बनाए मात्र नगरवासी खुसी हुन्छन् । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको संरचनाले मात्र एक्लै गर्न खोजियो भने नगरको विकास हँुदैन । नगरपालिका र नगर वासीमा भएका सम्भावनाको पहिचान गरेर कसको के विज्ञता छ, त्यसको हामीले सूची तयार गर्ने त्यो सूचीका आधारमा जे क्षमता छ त्यो क्षमताको वातावरण मिलाउन सके हामी नगरको समग्र विकास गर्न सक्छौ । युवा बेरोजगार छन् । युवालाई रोजगारी दिन सक्ने धेरै सम्भावना रहेका छन् । निर्वाचित भइसकेपछि म होइन, हामी गर्छौं भन्ने हाम्रो प्रतिवद्धता छ । क्षमता र योग्यता अनुसारको सीप र ज्ञान अनुसारको काम दिएर परिचालन गर्छौ । भीमदत्त नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउनका लागि हामी सुशासन बनाउँछांै र जनताको सेवा जनतासम्म पुर्‍याउनका लागि प्रतिवद्ध हुन्छौ । भ्रष्टाचारमुक्त नगरपालिका बनाउँछौं । जिम्मेवारी आइसकेपछि स्रोत र साधनलाई परिचालन गर्ने, जनमुखी सेवा प्रदान गर्ने काममा हामी अगाडि बढ्ने छौं ।
तपाईको प्रतिस्पर्धी को ?
– बैशाख ३१ गते पहिलो चरणको निर्वाचनको तयारीमा थियौं । त्यो तयारीका बेला सबै पार्टीका साथीहरू प्रतिस्पर्धाका गर्नका लागि आफ्ना उम्मेदवार अगाडि सार्नुहुन्छ भन्ने विश्वास थियो । त्यही विश्वासका साथ चुनावी अभियानलाई अगाडि बढायौं । ७ नम्बर विवादित क्षेत्र होइन । ७ नम्बर प्रदेश पहाड तराई र हिमाल सबैतिर मिलेको छ । प्रतिस्पर्धा हुँदो हो त प्रतिस्पर्धाको बीचमा आउँथे । प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि लोकतन्त्र भइसकेपछि, दलीय व्यवस्था भइसकेपछि सबैले आ–आफ्ना उम्मेदवार घोषण गर्छन् । सबैले प्रतिस्पर्धा गराउन चाहन्छन् । प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि महिनौं दिन पर्खदा समेत अन्य पार्टीका उम्मेदवार नआउँदाखेरी मैले कुन पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने ?
भीमदत्त नगरपालिकाका वासिन्दा परिर्वतन खोजिरहेका छन् । नयाँ जोश र जाँगरका साथ नगर विकासको अभियान चलाएका छौं । दलित जनजाति सबैको सहभागिता हामी सबै हाम्रो नगरपालिका बनाउँछौं भन्ने अभियानमा लागि रहेका छौं । नगरवासीको सहयोग तथा साथबाट प्रतिस्पर्धाभन्दा हामी जित्छौं ।
भीमदत्तमा जित सुनिश्चित छ भन्न खोज्नुभएको ?
– अन्य दलले कहिले उम्मेदवारको टुंगो लगाउँछन् भनेर पर्खिएका छौं । प्रतिस्पर्धामा लागि हामी तयार छौं । पटक–पटक निर्वाचन सारिँदै आएको छ । जति पटक निर्वाचन सारे पनि हामी चुनाव जित्छौ । र, जितका लागि हामीसँग पर्याप्त आधार छन् ।
ती आधार के–के हुन् ?
– निर्वाचनमा विजयी भइसकेपछि हामी प्रतिवद्धता अनुसार नै काम गर्नेछौं । हामी सबैका ज्ञान, क्षमता, योग्यता र सीपको आधारमा हाम्रो नगरपालिका हामीले बनाउनुपर्छ भने अभियानका साथ जान्छौ । १ वर्षे, ५ वर्षे र २५ वर्षे कार्ययोजना छन् । स्पष्ट दृष्टिकोण छन् । ती दृष्टिकोण मात्र होइनन् । ती मुद्दा, योजना मात्र होइनन्, हामी पूरा गरेर देखाउँछौं ।
निर्वाचन जितिसकेपछि प्रतिवद्धताबाट भाग्दैनौं । हामी यो प्रतिवद्धता गर्दछौं, निर्वाचनमा विजयी भइसकेपछि निजी स्वार्थ र पदमा लिप्त रहने छैनौं, जनताको हक, अधिकार र जनताको सेवामा सेवक भएर काम गर्नेछौं । दलीय व्यवस्थामा, शान्ति र मानवअधिकारमा विश्वास गर्छौं । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कसैको रहरले दिएको होइन, यहाँका जनताको दवावले आएको हो ।
विगतको ७ वर्षको अवधिमा पार्टीमा कार्यकारी पदीय जिम्मेवारीको अनुभवले यहाँको शिक्षा, समाज, आर्थिक क्षेत्रको विकासका लागि म लाग्ने छु । भीमदत्त नगरपालिकासहित सबै स्थानीय तहमा जित्ने दावीका साथ पार्टीले आफ्नो चुनावी रणनीतिलाई अगाडि बढाएको छ । २०५१ साल र २०५४ सालतिर फर्केर हेर्ने हो भने पनि हामीले जितेका थियौं । कञ्चनपुर एमालेमय हुँदैछ ।
एमालेभित्र नै असन्तुष्ट पक्ष छन् नि ! कसरी मिलाउनु हुन्छ ?
– असन्तुष्ट पक्ष छन् भन्ने कुरा मेरो जानकारीमा छैन । २० वर्षपछि निर्वाचन हुने भएकाले सबैको चाहना हुनु स्वभाविक हो । हाम्रो पार्टी संगठन विश्वास गर्छ । ३ दिनभित्र आह्वान गरांै, सबैभन्दा बढी जनमास कसले निकाल्छ । म दावीका साथ भन्छु– सबैभन्दा बढी कार्यकर्ता एमालेले निकाल्छ ।’ हामीसँग कार्यकर्ताको पंक्ति छ । लामो समयदेखि त्याग गर्नु भएको विज्ञ पनि हुनुहुन्छ ।
निर्वाचनमा दावी गर्नुलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ । एउटै पदका लागि धेरै साथीले आकांक्षा हुनु भनेको पार्टी पंक्तिबाट हामी सम्पन्न हुनु हो । त्यो प्रक्रियामा इच्छा राखिसकेपछि छलफल हुन्छ । विभिन्न क्षेत्र विभिन्न कुराबाट सोचेर पार्टीले एउटा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्णय गरिसकेपछि त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि हामीले पालना गरेनौं भने पार्टी व्यक्तिवादीतिर जाने खतरा हुन्छ ।
मेयरमा निर्वाचित भएमा पहिलो काम के गर्नुहुन्छ ?
– भीमदत्त नगरपालिकामा म एक्लै जित्दैन । ९७ जनाको टीमले जित्छ । मेरो उम्मेदवारी व्यक्तिगत होइन । भीमदत्त नगरपालिकाको परिवर्तन चाहने सबैको जित हुनेछ । सबै साथ लिएर काम गर्नेछौं । म पहिलो काम म होइन हाम्रो नगरपालिका बनाउने छौं भन्ने प्रतिवद्धता गर्न चाहन्छु । र, सबैलाई त्यो प्रतिवद्धता गर्न आह्वान गर्नेछांै । पहिलो काम हामी प्रतिस्पर्धामा गए पनि निर्वाचनपछि साथी पराजय भए पनि उनीहरूको सुझाव ज्ञान, सीप र अनुभवलाई भीमदत्त नगरपालिकाको विकास गर्नका लागि प्रतिवद्ध गर्नेछु । अन्य विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका भीमदत्त नगरवासीको सीप र ज्ञानलाई परिचालन गर्नेछौं । हाम्रो नगरपालिका हामी बनाउने छौं । विभिन्न क्षेत्रमा हामी नेतृत्व गर्नछौ भन्ने प्रतिवद्धता जनाउने काम हुनेछ ।